မိဘ စော်ကား ဒဏ်(၁၀)ပါး -
မိမိ မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ မိဘတွေများအား ဒေါသတကြီး၊ အော်ကြီး၊ ဟစ်ကျယ်ပြန်လှန်ပြောဆိုခဲ့မိလျှင် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပ္ပန်ဘဝတွင်ဖေါ်ပြပါ ဒဏ်ဆယ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တစ်ပါးပါး သင့် တတ်ပါသည်။
၁။ ကြမ်းကြုတ်သော ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း
၃။ အနာရောဂါ ဖြစ်ခြင်း
၅။ မင်းပြစ် မင်းဒဏ်သင့်ခြင်း
၈။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း
၉။ နေအိမ်စသည့် မီးလောင်ခြင်း
၁၀။ ငရဲကျရောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိ မှန်နေတယ် ဆိုရင်တောင်မှ မိဘတွေကို ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်ကြီးကျယ်ပြန်လှန် မပြောဆိုသင့်ဘူးပေ။ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် နားဝင်အောင် အေးအေးဆေးဆေးသာယာစွာ ပြောဆိုကြရပါမည်။
အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြန်ပြောလို့မှ မိဘများလက်မခံရင်လည်း သူတို့ရှေ့မှောက်မှ ရှောင်ထွက်သွားလိုက်ပါ ။ မိဘတွေ စိတ်ဆိုးပြေလောက်မှ ဖြေးဖြေးခြင်း နားဝင်လာအောင်ပြန်လည်ရှင်းပြပါ ။
အကယ်၍ မိဘများကို လွန်လွန်ကျူးကျူး ပြန်ပြောမိပြီဆိုရင် မိဘကို ဖွင့်ပြောပြီး ဝန်ချကန်တော့ တောင်းပန်ပါ။ မိဘများမရှိတော့ပါက ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့သွားပြီး ဝန်ချကန်တော့ တောင်းပန်သင့်ပေသည်။
မိဘများကျေးဇူး သိတတ်သူများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
မောဂ္ဂါလာနထေရဝတ္ထု ဒဏ္ဍဝဂ် ဓမ္မ ပဒပါဋ္ဌိတော် အဋ္ဌကထာ
မိဘတွေကို မပြောသင့်သော စကား (၁ဝ)ခွန်း ထိုစကားများ ပြောခြင်းမှ အထူးရှောင်ကျဉ်ပါနော်…
လူတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘတွေကို အောက်က စကားဆယ်ခွန်းထဲက တစ်ခွန်း ဒါမှမဟုတ်… တစ်ခွန်းထက် ပိုပြောခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သားသမီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က မိဘတွေကို ဒီလိုစကားတွေကို ထပ်မပြောတော့ဘဲ နားလည်ပေးကြရအောင်…..
လူ့ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နံဘေးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ချစ်သူခင်သူ၊သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားမှ သူတို့က သင့်ဘဝမှာဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း သိတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
မိဘတွေကို ရိုသေလေးစားပါ။ သင် ဘာအမှားပဲလုပ်လုပ်.. သူတို့က သင့်ကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ မိဘရဲ့ရင်ခွင်ဟာ… သင့်အတွက် လေငြိမ်ရာအရပ် ထာဝရနားခိုရာ ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေဖုန်းဆက်တာ စကားပြောချင်ရုံ သက်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုချဖို့ပဲ မလောပါနဲ့
(၃) ပြောရင်လည်း နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့!
(၄) မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထပ်ထပ်ပြောထားရက်သားနဲ့….. လုပ်ထားတာတွေကလည်း မကောင်းဘူး။ သူတို့အင်အားနဲ့မမျှတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ဂရုတစိုက်နဲ့ သူတို့ကိုမလုပ်ဖို့ တားတယ်။ ဒါပေမဲ့… ဒါဟာ သူတို့အသုံးမဝင်တော့ကြောင်း သူတို့ကို ခံစားစေပါတယ်။
မိဘတွေရဲ့အကြံဉာဏ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အသုံးတည့်ချင်မှ တည့်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက် နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်တို့ ပြောသင့်ပါတယ်။
(၆) သားအခန်းကို မရှင်းပါနဲ့လို့ ပြောထားရက်နဲ့ အခုတော့ကြည့် ပစ္စည်းတွေ ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာက ကောင်းပါတယ်။ မရှင်းချင်ရင် သူတို့ရဲ့စေတနာကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့အပြန်ကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့မေတ္တာ၊ သူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေထဲ ထည့်ချက်ထားကြတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ရုံပါပဲ..။
သူတို့ရဲ့ တစ်သက်ချွေတာလာတဲ့ အကျင့်တွေ ပြောင်းလဲရ ခက်ပါတယ်။ ဟင်းချက်ရင် တစ်နပ်စာချက်ဖို့ အကြံပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
(၁ဝ) ဒီပစ္စည်းတွေ မယူတော့ပါဘူးဆို ဘာဖြစ်လို့ ဒီမှာပုံထားရသေးတာလဲ!
မိဘတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အရာတွေကို သိမ်းထားချင်တတ်ကြတယ်။ သူတို့သိမ်းထားတာတွေ တစ်အိမ်လုံးပြည့်နေပါစေ… နောင်တချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝက ဝတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြည်နူးကြဦးမယ် မဟုတ်ပါလား…!
မိဘကိုစော်ကား… စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်….. မျက်ရည်ပေါက် ကြီးငယ်ကျအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ .. ဘယ်သားသမီးမဆို….
ဘဝမှာ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေပါဘူး…၊ အရာရာ ဆုံးရူံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ….
၅၅၀ နိပါတ်တော် ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေ …. ထုတ်ပြနေရင်… မယုံသူတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်တယ်….။
အခုလက်တွေ့ ဘဝဖြစ်စဉ်မှာဘဲ …. သက်သေခံအဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးဘဲ….။
လွယ်လွယ်နဲ့ပြီးရမယ့်…၊ ရ ရမယ့်အရာတောင်… အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ … ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်…။
မျက်စေ့ဖွင့် နားစွင့် လေ့လာကြည့်ပြီး…. သင်ခန်းစာယူကြ… အမှားကိုရှောင်ကြပါလေ…။
Credit _ Original
မိမိ မှနျသညျဖွဈစေ ၊ မှားသညျဖွဈစေ မိဘတှမြေားအား ဒေါသတကွီး၊ အျောကွီး၊ ဟဈကယျြပွနျလှနျပွောဆိုခဲ့မိလြှငျ လကျရှိ ပစ်စုနျပ်ပနျဘဝတှငျဖျေါပွပါ ဒဏျဆယျပါးထဲက အနညျးဆုံး တဈပါးပါး သငျ့ တတျပါသညျ။
၃။ အနာရောဂါ ဖွဈခွငျး
၁၀။ ငရဲကရြောကျခွငျး တို့ဖွဈကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မိမိ မှနျနတေယျ ဆိုရငျတောငျမှ မိဘတှကေို ဒေါသတကွီး အျောဟဈကွီးကယျြပွနျလှနျ မပွောဆိုသငျ့ဘူးပေ။ အကြိုးသငျ့ အကွောငျးသငျ့ နားဝငျအောငျ အေးအေးဆေးဆေးသာယာစှာ ပွောဆိုကွရပါမညျ။
အကြိုးသငျ့ အကွောငျးသငျ့ ပွနျပွောလို့မှ မိဘမြားလကျမခံရငျလညျး သူတို့ရှမှေ့ောကျမှ ရှောငျထှကျသှားလိုကျပါ ။ မိဘတှေ စိတျဆိုးပွလေောကျမှ ဖွေးဖွေးခွငျး နားဝငျလာအောငျပွနျလညျရှငျးပွပါ ။
မိဘမြားကြေးဇူး သိတတျသူမြား ဖွဈနိုငျကွပါစေ။
မောဂ်ဂါလာနထရေဝတ်ထု ဒဏ်ဍဝဂျ ဓမ်မ ပဒပါဋ်ဌိတျော အဋ်ဌကထာ
မိဘတှကေို မပွောသငျ့သော စကား (၁ဝ)ခှနျး ထိုစကားမြား ပွောခွငျးမှ အထူးရှောငျကဉျြပါနျော…
လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့မိဘတှကေို အောကျက စကားဆယျခှနျးထဲက တဈခှနျး ဒါမှမဟုတျ… တဈခှနျးထကျ ပိုပွောခဲ့ဖူးကွမယျ ထငျပါတယျ။ သားသမီးဖွဈတဲ့ ကြှနျတျောတို့က မိဘတှကေို ဒီလိုစကားတှကေို ထပျမပွောတော့ဘဲ နားလညျပေးကွရအောငျ…..
လူ့ဘဝက တိုတောငျးလှနျးပါတယျ။ ကိုယျ့နံဘေးက ဆှမြေိုးသားခငျြး၊ ခဈြသူခငျသူ၊သူငယျခငျြးတှကေို တနျဖိုးထားသငျ့ပါတယျ။ ဆုံးရှုံးသှားမှ သူတို့က သငျ့ဘဝမှာဘယျလောကျအရေးပါကွောငျး သိတာမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။
မိဘတှကေို ရိုသလေေးစားပါ။ သငျ ဘာအမှားပဲလုပျလုပျ.. သူတို့က သငျ့ကို ခှငျ့လှတျဖို့ အသငျ့ရှိနပေါတယျ။ မိဘရဲ့ရငျခှငျဟာ… သငျ့အတှကျ လငွေိမျရာအရပျ ထာဝရနားခိုရာ ဆိပျကမျးဖွဈပါတယျ။
(၁) အငျးပါ! အငျးပါ! သိပွီ…၊ အရမျးရှုပျတာပဲ!
(၂) ကိစ်စရှိသေးလား? မရှိရငျ ဖုနျးခတြော့မယျ!
မိဘတှဖေုနျးဆကျတာ စကားပွောခငျြရုံ သကျသကျဖွဈလိမျ့မယျ။ သူတို့ရဲ့ရညျရှယျခကျြကို ကြှနျတျောတို့ နားလညျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဖုနျးကိုခဖြို့ပဲ မလောပါနဲ့
(၃) ပွောရငျလညျး နားလညျမှာ မဟုတျပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့!
(၄) မလုပျပါနဲ့လို့ အထပျထပျပွောထားရကျသားနဲ့….. လုပျထားတာတှကေလညျး မကောငျးဘူး။ သူတို့အငျအားနဲ့မမြှတဲ့ အလုပျကို လုပျတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့က ဂရုတစိုကျနဲ့ သူတို့ကိုမလုပျဖို့ တားတယျ။ ဒါပမေဲ့… ဒါဟာ သူတို့အသုံးမဝငျတော့ကွောငျး သူတို့ကို ခံစားစပေါတယျ။
(၅) ဟာ.. ဖဖေေ၊ မမေတေို့နညျးက ခတျေတုံးနပွေီ။
မိဘတှရေဲ့အကွံဉာဏျက ကြှနျတျောတို့အတှကျ အသုံးတညျ့ခငျြမှ တညျ့လိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီထကျ နားထောငျလို့ကောငျးတဲ့ စကားကို ကြှနျတျောတို့ ပွောသငျ့ပါတယျ။
(၆) သားအခနျးကို မရှငျးပါနဲ့လို့ ပွောထားရကျနဲ့ အခုတော့ကွညျ့ ပစ်စညျးတှေ ရှာမတှတေ့ော့ဘူး။ ကိုယျ့အခနျးကို ကိုယျတိုငျရှငျးတာက ကောငျးပါတယျ။ မရှငျးခငျြရငျ သူတို့ရဲ့စတေနာကိုတော့ မစျောကားပါနဲ့။
(၇) သားဘာစားမယျဆိုတာ သားသိတယျ။ ဟငျးတှေ ထညျ့ထညျ့မပေးနဲ့တော့!
ကြှနျတျောတို့အပွနျကို စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ မိဘတှကေ သူတို့ရဲ့မတ်ေတာ၊ သူတို့ရဲ့ဂရုစိုကျမှုတှကေို ကြှနျတျောတို့အတှကျ အထူးစီမံထားတဲ့ ထမငျးဟငျးတှထေဲ ထညျ့ခကျြထားကွတယျ။ ဒါကို ကြှနျတျောတို့က ဆိတျဆိတျငွိမျငွိမျနဲ့ လကျခံလိုကျရုံပါပဲ..။
(၈) ဒီဟငျးကနျြတှကေို မစားပါနဲ့လို့ မှာထားရကျနဲ့ စကားကိုနားမထောငျဘူး!
သူတို့ရဲ့ တဈသကျခြှတောလာတဲ့ အကငျြ့တှေ ပွောငျးလဲရ ခကျပါတယျ။ ဟငျးခကျြရငျ တဈနပျစာခကျြဖို့ အကွံပေးတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
(၉) သား ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ခငျြ့ခြိနျပွီး လုပျတတျတယျ။ တဗဈြတောကျတောကျ မပွောနဲ့ .. နားကိုငွီးတယျ။
(၁ဝ) ဒီပစ်စညျးတှေ မယူတော့ပါဘူးဆို ဘာဖွဈလို့ ဒီမှာပုံထားရသေးတာလဲ!
မိဘတှကေ ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူကွီးပွငျးလာခဲ့တဲ့ အရာတှကေို သိမျးထားခငျြတတျကွတယျ။ သူတို့သိမျးထားတာတှေ တဈအိမျလုံးပွညျ့နပေါစေ… နောငျတခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ကလေးဘဝက ဝတျခဲ့တဲ့ အဝတျအစားတှကေို ကြှနျတျောတို့ တှမေိ့တဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့ဝမျးသာကွညျနူးကွဦးမယျ မဟုတျပါလား…!
မိဘကိုစျောကား… စိတျမခမျြးမသာဖွဈအောငျ….. မကျြရညျပေါကျ ကွီးငယျကအြောငျ လုပျခဲ့တဲ့ .. ဘယျသားသမီးမဆို….
ဘဝမှာ ဘာလုပျလုပျ အဆငျမပွပေါဘူး…၊ အရာရာ ဆုံးရူံးမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရမယျဆိုတာ….
၅၅၀ နိပါတျတျော ထဲက ဇာတျလမျးတှေ …. ထုတျပွနရေငျ… မယုံသူတှေ ရှိကောငျး ရှိနိုငျတယျ….။
အခုလကျတှေ့ ဘဝဖွဈစဉျမှာဘဲ …. သကျသခေံအဖွဈအပကျြတှေ အမြားကွီးဘဲ….။
လှယျလှယျနဲ့ပွီးရမယျ့…၊ ရ ရမယျ့အရာတောငျ… အခကျအခဲတှအေမြားကွီးနဲ့ … ရငျဆိုငျရတတျပါတယျ…။
မကျြစဖှေ့ငျ့ နားစှငျ့ လလေ့ာကွညျ့ပွီး…. သငျခနျးစာယူကွ… အမှားကိုရှောငျကွပါလေ…။
This Year : 275212
Total Users : 570345
Total views : 2628064